Mepụta weebụsaịtị, Mara Mma na Nkeji | Martech Zone
Thursday, June 7, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Wụnye na ịhazi usoro njikwa ọdịnaya, ịchọta ụlọ ọrụ ị nwere ike ịtụkwasị obi, na ịnweta ụdị ọhụụ pụrụ iche ma dị ọnụ ala nwere ike ịbụ nnukwu nsogbu maka obere azụmaahịa. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị enweghị akụrụngwa ma ọ bụ ndidi iji rụpụta saịtị ọkachamara… IM Okike nwere ike ịbụ nhọrọ zuru oke maka obere azụmaahịa gị.
Ebe nrụọrụ gị dị na usoro 3 dị mfe:
Họrọ imewe: A na-ahazi ndebiri niile eji amamihe rụọ ọrụ wee bịa na ọdịnaya dị mkpa ma dịkwa mkpa, yabụ ha adịla ngwụcha.
hazie: Fanye ọdịnaya gị - ederede, eserese, vidiyo wdg. Ọ dị mfe. Ndi otu IM-Okike ga-ano nyere gi aka.
Kwusaanụ gị na saịtị: Fanye ọdịnaya gị - Kwusaanụ saịtị gị: Jikọta ya na ngalaba gị dị ma ọ bụ zụta nke ọhụrụ. Ọ dị ọsọ ọsọ, dị mfe, ị nweta adreesị ozi-e nke gị ma anyị jide n'aka na Google ga-edepụta gị nke ọma.
Ndị okike IM meghere ọ bụrụ usoro ndị na - edezi ọdịnaya n'ime ndị na - emepụta ya! Nwere ike ịmepụta ma bulite atụmatụ weebụ gị kachasị mma site na sistemụ ha. Ruo ugbu a, saịtị 672,248 ka emepụtara na IM Creator! Ọ dịghị njọ.
Tags: CMSusoro njikwa ọdịnayadezie-na-ebeonye okike